Home FOOTBALL MANAGER Ole Gunnar Solskjear tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Nohavaozina farany teo March 10, 2019
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Ilay namono zazakely". Ny tantarantsika Ole Gunnar Solskjear tantaran-tantaran'ny tantaram-piraisan'entana momba ny tantaran'ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ny zava-mitranga misy eo amin'ny vanim-potoana hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana.
Eny, fantatry ny rehetra fa anisan'ireo mpikambana malaza ao amin'ny Hall of Fame Old Trafford izy. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Ole Gunnar Solskjear izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Mombamomba ny mpanoratra Ole Gunnar Solskjear Ole Gunnar Solskjear Mamisoa @ Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Ole Gunnar Solskjaer dia teraka tamin'ny andro 26T febroary 1973 ho an'ny reniny, Brita Solskjaer sy ny rainy, Oivind Solskjaer any amin'ny morontsiraka andrefan'i Norvezy. Ireto ambany ireto ireo ray aman-dreny norvezianina ao Ole Gunnar.
Solskjaer dia teraka ho fianakaviana iray fanatanjahan-tena ary fianakaviana iray manetry tena. Nobeazina tao amin'ny tanànan'ny nosy Kristiansund, any amin'ny faritra atsinanan'i Norvezy, izy. Araka ny voalazan'ny Manchester Evening News, ny rainy dia Greco-Romana Mpanao ady totohondry izay nandresy an'i Norvezy nandritra ny dimy taona.
Fanamarihana: Ny rivotra Greco-Roman dia fomba iray tolona izay mandrara azy mihazona eo ambanin'ny tavy ary mifaninana amin'ny andiany rehetra amin'ny Lalao Olaimpika natao nanomboka tamin'ny 1908. Ny Oiwind, Solskjaer, dia ny No Norway's No 1 Greco-Roman superstar ant 1966-71. Tamin'ny voalohany, ny fanantenan'i Solskjaer zokiny dia ny hanarahan'ny zanany ny diany.
Indrisy, ny hatezerana dia sahiran-doha loatra ho an'i Ole ho zazakely. Nanandrana ny fanatanjahantena nandritra ny telo taona izy saingy nanosika azy kosa ny zana-tsipìkany noho izy sahirana mba hanandramana hamolavola ny zava-bitan'ny rainy. Noho ny sombiny kely, kely i Solskjaer dia nampihetsi-po ny namany tamin'ny taona nahaterahany.
Samy nanana fangorahana ny ray aman-dreniny tamin'ny zanany lahy izay nomena anarana hoe "Tiny Ole". Nankahala izy ireo rehefa natsipy sy nopotehan'ny mpanohitra foana. Nanana ny ampy, na i Brita sy Oivind aza nanizingizina fa ny zanany lahy dia tokony hiala amin'ny fanatanjahantena. Nahitana traikefa mampalahelo ho an'ny taranaka misy ady.
Mombamomba ny mpanoratra Ole Gunnar Solskjear Ole Gunnar Solskjear Mamisoa @ Asa fanorenana aloha
Ankoatra ny ady, Ole dia nanana fitiavana hafa, izany no baolina kitra. Izy dia natory tamin'ny baolina isak'alina, saingy tsy afaka nampihatra izany.
Ny fomba fijerin'ny baolina kitra Britanika dia nametraka ny fijaliany ho an'ny soccer:
Nandany fotoana betsaka hijerena ny fahitalavitra dia namela azy ho tia ny fampisehoana baolina kitra. Anisan'izany ny Asabotsy BBC Match of the Day izay nanala baraka ny Norveziana, ny hetsika baolina kitra farany avy any Angletera.
Nalefa tany Norvezy tamin'izany fotoana izany ihany koa ny fandaharan'asan'ny baolina kitra britanika toy ny anglisy soccer Magazine, Shoot and Match Weekly.
"Efa ela aho no nanoratra ny takelaka sy ny fikambanan'ny ekipan'ny Match of the Day. Indraindray aho dia nahafantatra ny zava-drehetra momba ny baolina kitra any Angletera, " hoy i Ole izay ny fitiavana voalohany no Liverpool (Bitsiho tsara izany!)
Taorian'ny fijerena baolina kitra tao amin'ny fahitalavitra, ny manaraka nanaraka izany dia tanora Solskjaer iray mitaingina baolina kitra tsy misy farany amin'ny fasika sy tora-pasika manakaiky ny tranony. Tsy nanam-potoana firy ny ray aman-dreniny nanosika azy handray fanapahan-kevitra momba ny fanatanjahan-tena hitany vao haingana.
Mombamomba ny mpanoratra Ole Gunnar Solskjear Ole Gunnar Solskjear Mamisoa @ Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny fanoloran-tenan'i Solskjaer sy ny talentana vaovao dia nahita azy tamin'ny taona 8 nisoratra anarana tao amin'ny kliobem-pokonolona tao an-tanànany, tamin'izy mbola tanora. Clausengen dia klioba kely iray tao an-tanàna izay fantatra fa niteraka zaza malaza noho ny fomba fanaovany talenta. Vantany vao tafiditra tao amin'ny klioba, dia nisy tsaho milaza fa tsy mety ny manao izany noho ny habeny.
Soa ihany, nanodidina ny faha-zokiny taonany i Solskjaer dia nanomboka nitifitra ary natsangany. Lasa matanjaka kokoa sy matanjaka izy saingy mbola tsy ampy tsara ho azy ny miditra amin'ny ligy lehibe na dia efa nentina tany amin'ny baolina kitra aza izy. Na dia nisy ekipa sy olon-tsotra aza izay te-hilalao ny filokana ary hitondra azy.
Olona iray fanta-daza no mpanafika Manchester City teo aloha Aage Hareide izay liana kokoa an'i Ole ary dia naniry mafy ny hamindra azy ho any amin'ny club iray lehibe. Taorian'ny nahavoatran'i XenumX ny tanjona 31 an'i Clausengen tao anatin'ny fizaran-taona iray, i Hareide (sary etsy ambany) dia tsy maintsy nanosika ny bokotra hanangona ny talentany tanora.
Mombamomba ny mpanoratra Ole Gunnar Solskjear Ole Gunnar Solskjear Mamisoa @ Road to Fame
Misaotra an'i Aage Hareide, i Ole tao amin'ny 1995 dia nafindra tany Molde, nitantana ny klioba Norvey Aage Hareide.
Tao amin'ny klioba, dia mbola nanohy nitombo ho toy ny mpilalao sarimihetsika manan-danja tao amin'ny Ligy Premier Norveziana izy. Ny tsiambaratelon'i Ole dia ny asa mafy sy ny fahaizany miasa ivelan'ny klioba amin'ny fanaovana fanao tsy miankina. Fotoana iray, nikendry ny handresy izy. Solskjær ihany koa dia nanana ezaka be momba an'i Angletera.
Mampalahelo ho an'i Hareide, tsy nanana Solskjaer izy nitarika ny fanafihana nandritra ny fotoana ela. Ny fanatsarana ny tanjona 31 tao amin'ny 38 dia nahasarika mpitsidika ny Premier League izay nanodidina azy toy ny antsantsa - anisan'izany United.
Mombamomba ny mpanoratra Ole Gunnar Solskjear Ole Gunnar Solskjear Mamisoa @ Mitsangàna mba ho ankizilahy
Taorian'ny tsy fahombiazany Alan Shearer, Man United tamin'ny 29 Julio 1996 nanapa-kevitra ny haka an'i Ole Gunner Solskjear izay tamin'izany fotoana izany tsy fantatra tany ivelan'ny tanindrazany.
Vitsy ny lalao nilalao, nanjary nazava tamin'ireo mpankafy izay nanamafisan'i United ny iray amin'ireo fifandanjana tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny klioba. Solskjaer dia nahatratra ny baikony 18 Premier League tanjona ho an'i United tamin'ny vanim-potoana voalohany.
Ny fotoana tena nandraisan'i Norvezy dia fony izy mbola nitazona ny tanjony nandritry ny fotoana nandresy Bayern Munich ao amin'ny 1999 UEFA Champions League Final. Izany no tanjona nanampy an'i Etazonia hiantoka ny Tranobe ary azo antoka fa iray izay nanambatra ny anarany tao amin'ny efitranon'ny lisitry ny klioban'ny klioba.
Ny fahafatesan'i Solskjaer, miaraka amin'ny fahatanorany, dia nampitain'ny filazan'ny britanika azy ny "Mpanakanto zazakely".
Na izany aza, ny tantaran'ny lehilahy United United dia tia tadidy fa ny "Super-Zana". Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Mombamomba ny mpanoratra Ole Gunnar Solskjear Ole Gunnar Solskjear Mamisoa @ Relationship Life
Raha nilalao ho an'i United i Solskjaer dia nipetraka tany Bramhall niaraka tamin'ny vadiny vavy iray antsoina hoe Silje.
Samy manan-janaka telo ny mpivady roa; Noa, Karna ary Elia.
Solombavambahoaka Solskjaer Noah dia niaiky tamin'ny haino aman-jery fa tsy mpilalao azy ny dadany. Tamin'io fotoana io dia nanohana an'i Wayne Rooney i Noa fa tsy ny rainy.
Mombamomba ny mpanoratra Ole Gunnar Solskjear Ole Gunnar Solskjear Mamisoa @ Fiainana manokana
Ny fahafantaranao ny fiainan'i Ole Gunnar Solskjear dia hanampy anao hahazo sary feno azy. Rehefa mieritreritra an'i Norvezy any amin'ny fireneny ianao, dia mety hieritreritra volo malefaka, ririnina tsara tarehy, fanjonoana maro ary azo antoka TSY miaramila. Fantatrao ve?… Solskjaer dia efa nahavita herintaona an-taonany nanaovana asa fanompoana miaramila, izay nanomboka tamin'ny fotoana naha 19 taona azy.
Tao amin'ny 2008, Solskjaer no nanjary nandimby an'i Norvezy indrindra Ny laharam-pahamehana voalohany tamin'ny baikon'ny Norvezan'ny Orkestrian'i St. Olav nataon'i King Harald V avy any Norvezy.
Solskjaer dia pNankasitraka ny loka tamin'ny lanonana tamin'ny 25 Oktobra 2008 tao amin'ny tananan'i Kristiansund. Solskjaer no zandriny indrindra amin'ny mpivalo, ary matetika izy no voatendry ho mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina amin'ny taona manaraka.
Solskaer dia nijanona tao amin'ny Old Trafford na dia nisy klioba hafa naneho fahalianana taminy indrindra indrindra tao amin'ny 1998. Solskjaer na dia teo aza ny fanoloana azy dia nandà ny tolotra rehetra na dia manaiky ny tolotra omena azy aza i Manchester United.
Tranga faharoa momba ny tsy fivadihana:
Fotoana iray voafaritra tsara tao anatin'ny asany no nahatonga azy ho mpilalao matihanina rehetra amin'ny anaran'ny fametrahana fahafahana mazava amin'ny lalao mazava. Solskjaer no nahalala fa hahazo karatra mena izy. Ireo mpankafy baolina kitra dia nahita izany ho ohatra mazava tsara amin'ny fomba nametrahan'i Solskjaer ny klioba ho an'ny tombontsoa manokana.
Mombamomba ny mpanoratra Ole Gunnar Solskjear Ole Gunnar Solskjear Mamisoa @ Zava-dehibe ny asa atao
Manana rakikira Britanika izy:
Amin'ny 2 August 2008, fihetseham-po fijoroana vavolombelona Nanjary nankalaza ny Solskjær tao Old Trafford i Man United sy Espanyol. Io lalao ara-pihetseham-po io dia nahitana mpankafy 69,000 nanatrika ary nametraka rakitsoratra ho ny lalao fanamarinana avo roa heny amin'ny tantaran'ny britanika.
Fantatrao ve?… Solskjaer dia nanomboka coaching na dia toy ny mpilalao an'i United aza. Tamin'izany fotoana izany nandritra ny fahavaratra, Solskjaer dia niverina tany Norvezy mba hampiofana ny Akademia Statoil, sekoly ambaratonga faharoa ho an'ny tanora tanora be mpitia indrindra. Taorian'ny fisotroan-dronono, Solskjaer indray nandà fahafahana hitantana an'i Norvezy, nilaza fa 'tsy ho ela'.
Amin'ny maha-mpanazatra azy, Solskjaer no nahazo ny anarana Norveziana tamin'ny fotoana voalohany indrindra ho an'i Molde tao amin'ny 2011. Nahazo trôby efatra ihany koa izy ho mpitantana ny tahirin-tserasera United izay i Jesse Lingard sy i Paul Pogba.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Ole Gunnar Solskjear momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay